Low Volume PCB Assembly - အနိမ့် Volume Printed Circuit Board
နေအိမ်» PCB- သတင်း» အနိမ့်အမြင့် PCB တပ်ဆင်သူထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုချက်များ။
အနိမ့်အမြင့် PCB တပ်ဆင်သူထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုချက်များ။
အနိမ့် Volume ကို PCB ညီလာခံ: ညီလာခံကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသံပမာဏနည်းသော PCB တပ်ဆင်မှုသည်လိုအပ်သည့်အချိန်ဖြစ်လာသည်။ သင့်တွင် PCB လိုအပ်သော application များရှိသည်။ သို့သော်ဘတ်ဂျက်သည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အနိမ့်ဆုံးရင်းမြစ်များဖြင့်သင်သည်စျေးအသက်သာဆုံးဆက်သွယ်ရေး PCB တပ်ဆင်မှုသို့မဟုတ်များသောအားဖြင့် PCB ထုတ်လုပ်မှုကိုသင်ရှာဖွေလိမ့်မည်။
In case you areacompany with limited sources, we understand that controlling your budget and product schedule can be troublesome. A good idea is to reach out toaPCB assembler. ပုံနှိပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ assembler is more likely to haveafriendly relationship with their respective component distributor due to long-term cooperation’s.